6 Amagama aSisiseko aPhambili eGunyazisiweyo | Martech Zone
Njengoko siqhubeka singena nzulu kuphando olunzulu kunye nabathengi ngohlobo lwamagama aphambili atsala ukugcwala kwetrafikhi, sifumanisa ukuba iinkampani ezininzi zinoluvo oluphosakeleyo xa kufikwa kuphando kunye nokusetyenziswa kwamagama aphambili.
Iphepha elinye linokuma kakuhle uninzi lwamagama aphambili. Abantu bacinga ukuba bafuna ukuba nephepha elinye kwigama ngalinye elingundoqo abanqwenela ukujolisa kulo… Akunjalo. Ukuba unephepha elilungelelanisa igama eliphambili, amagama aphambili ongezelelweyo anokuma kwinqanaba elifanayo! Kutheni le nto uqhubeka ukongeza iitoni zamaphepha ngomxholo ophindaphindwayo xa unokwandisa iphepha elinye kunye nenqanaba leqela lamagama?
Amagama aphambili aphezulu ngamanqanaba aphezulu anokukhokelela kutyelelo oluninzi kodwa oko kunokuba semngciphekweni wokuguqulwa kwakho. Amagama aphambili anophawu kunye nendibaniselwano yejografi inokukuzisela abona bathengi… nokuba ishishini lakho aliyonyani.
Ukubeka kumsila omde (ivolumu yokukhangela ephantsi, ukubaluleka okukhulu) amagama aphambili akuthethi ukuba wena awunakho ukubeka kwinqanaba kukhuphiswano oluphezulu, amagama aphambili aphezulu. Ngapha koko, sifumanisa ukuba njengoko abathengi bethu bekwinqanaba eliphezulu lamagama aphambili emisila, bahlala bathambeka ekumgangatho ophezulu ngokwexesha. Kwaye ukubuyela umva ayisiyonyani. Kungenxa yokuba ubekwa kwinqanaba lokukhuphisana kakhulu, oko akuthethi ukuba uya kuba nenqanaba kuyo yonke imigaqo enxulumene nomsila omde. Imigaqo emide yomsila kufuneka ixhaswe ngumxholo ofanelekileyo.
Ukugcwala ngakumbi akusoloko kuthetha Uguquko olungakumbi. Amaxesha amaninzi, oko kuthetha amaxabiso aphezulu okubhabha kunye neendwendwe ezikhathazayo kuba azifumani into ebebeyifuna.
Sebenzisa amagama aphambili kwi iinkcazo zemeta ayinakuchaphazela isikhundla sakho, kodwa iya kuliphucula inani lakho lokucofa kwiphepha lokukhangela kwiinjini yokukhangela (SERP). Khumbula ukuba amagama aphambili afunwayo asesibindi kwi-SERP, etsala umdla ekungeneni kwakho hayi kwabanye.
Uninzi lwabantu alusebenzisi amagama amafutshane ophando, endaweni yokuchwetheza imibuzo yonke kwiinjini zokukhangela. Ukuba ne-FAQ (umbuzo obuzwa rhoqoIsicwangciso sinokuba sisicwangciso sokusebenzisa amagama aphambili.
Ngaba unayo enye?
Ungayisebenzisa njani amagama ngempumelelo
Uyenza njani eyakho Imihla yokuLungisa
tags: elingundoqoyophando ngegama elingundoqoUkusetyenziswa kwegama elingundoqoamagama
Ukucwangcisa, ukuYila, kunye nokuSebenza kweWebhusayithi
Awunguye Fortune 500
Epreli 19, 2012 ngo-12: 30 PM
thnx kolu lwazi, kwaye ulinde ezinye ngokukhawuleza
Epreli 20, 2012 ngo-9: 48 AM
Ukuhamba kwezithuthi kulungile, kodwa uguquko lungcono. Kubalulekile ukufaka imisila emide kumxube. Abantu abakhangela ngamagama aphambili emsila bafuna into ethile. Baye bahambisa imowudi yophando eyadlulayo kwaye kukho ithuba elingcono lokuguqulwa.